Dotmg – Page 2 – Malag@sy Miray
Ho avy aho.
Malala ô, Ny zanatsika roa, ampatorio aloha, fa te-hahita an-dria aho. Ny entana sy trano Diovy, sasao rano fa te-hahita an-dria aho. Ny rano omano am-patana hifampandroana vatana fa te-hahita an-dria aho. Malala ô, Ilay varavarana io aleo hitafitafy Hidirako io anio F’izaho tsy hihafihafy. Tsy adanadana anefa raha toa tsy manahirana, antonona ahy io rehefa hoe afaka idirana. Ary mba tsy haneno ny savily sy karetsaka: Mba angalaon-dria menaka. Dia iny no atenteno Ataovy betsabetsaka, fa te-hahita an-dria aho Kanefa aoka kosa tsy ho vonto tafahoatra, Fandrao dia mampisosa Raha toa malama loatra. Malala ô, Dia aoka izao tsy ho adino: Raha tonga any aho akia, Giazo sy fihino…
Dotmg	6 Commentaires
Malomaloka mahangômangôma ny andro, ilay mahakamokamo tsy maha-te hiasa iny. Vao avy bedin’ny mpampiasa ireto mpiasa roalahy fa tsy mahafa-po loatra hono ny fandehan’ny asany ary norahonany fa tsy hahazo fisondrotan-karama amin’irý taona vaovao irý raha tsy mahatratra ny vokatra enjehina. Efa fomban’ny mpampiasa ihany itý toetra itý ikarohana fomba handavana ny fisondrotan-karama ho an’ireto mpiasany izay efa fanao isaky ny taona vaovao. Gagagaga kosa i Setra raha mahita an’itý namany, i Guss, toa tsy rototra firy, ary sady mbola velon-tsioka no tsy mifofotra amin’ny asa fa mihodinkodina fotsiny. Amin’ny fotoana hafa anefa rehefa avy omen’ny mpampiasa bedibedy itý ranamana itý dia tsy ahitan-teny fa mitsoitsoy toy ny vorona nolemana.…
Dotmg	24 Commentaires